२०७३ चैत १९ गते शनिवारको प्रतीक दैनिक
विवादको डरले सांसद यादव ठेक्का प्रक्रियामा गए, ७८ लाखसम्मको काम कम हुने
प्रस, परवानीपुर, १८ चैत/ पर्सा क्षेत्र नं २ का प्रत्यक्ष सांसद विचारी यादवले गजबको जुक्ति निकालेका छन् । चालू आवको लागि निकासा भएको ३ करोड खर्च गर्न विभिन्न विकासका योजना अगाडि बढाई समयमा सम्पन्न गर्न टेन्डर प्रक्रिया अघि सारेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत उनले संसदीय कोषबाट प्राप्त रु तीन करोड आप्mनो क्षेत्रको भौतिक संरचना विकास गर्ने सोच बनाएका छन् । तर यसबाट लाभ नहुने प्राविधिकहरूको बुझाइ छ । नगर तथा गाउँको काम सम्पन्न गराउन उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्दा तीन प्रतिशत श्रमदान पाइन्छ तर टेन्डर प्रक्रियामा सोही बजेटको करिब ७८ लाख रकम कम हुने पक्का रहेको प्राविधिकको भनाइ छ । टेन्डर प्रक्रियामा काम गएपछि १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर अर्थात् भ्याट कट्छ । तीन करोडको १३ प्रतिशत निकाल्ने हो भने ३९ लाख रकम हुन आउँछ । त्यसपछि ठेकेदारले १५ प्रतिशत मुनाफा निकाल्छ । तीन करोडबाट भ्याटको रकम ३९ लाख घटाएर आएको २ करोड ६१ लाखको १५ प्रतिशत निकाल्ने हो भने ३९ लाख १५ हजार आउछँ । अर्थात् तीन करोडमा रु ७८ लाखको काम कम हुन्छ । टेन्डर प्रक्रियामा गएपछि योजनामा
मालपोत प्रमुख पोखरेलले रवाना बुझे, अमिन कुटिएको विरोधमा नापी कार्यालय बन्द
प्रस, वीरगंज, १८ चैत/ मालपोत कार्यालय, पर्साका प्रमुख मालपोत अधिकृत प्रकाशप्रसाद पोखरेलले अन्ततः आज रवाना बुझेका छन् । फागुन १५ गते सचिवस्तरीय निर्णयबाट भूमिसुधार कार्यालय, सप्तरीको प्रमुखमा काज खटाइएका पोखरेल अटेर गरेर अहिलेसम्म वीरगंज मालपोतमैं बसेका थिए । फागुन १७ गते आचारसंहिता लागू हुनु पहिले उनलाई काज सरुवाको पत्र पठाइएको र निजको ठाउँमा अर्को आदेश नहुन्जेल सनत द्विवेदीलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी मन्त्रालयले दिएको थियो । एक महिनासम्म पत्र नपाएको भनी वीरगंजमैं बसिरहेका पोखरेललाई चैत १६ गते स्थानीय टोल सुधार समितिका युवाहरूले कार्यालयमा बेइज्जत गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएका थिए । मालपोत कर्मचारीका अनुसार आज मन्त्रालयका सचिवले तोकिएको ठाउँमा रवाना लिएर जान आदेश दिंदै पुनः पुरानै पत्र पठाएपछि पोखरेलले रवाना बुझेका हुन् । यता मेन्टेनेन्स नापी कार्यालय, वीरगंज आज बन्द रह््यो । नापीका अमिन मोतीलाल प्रसादलाई हिजो केही व्यक्तिले कार्यालयमैं कुटपिट गरेको विरोधमा आज कर्मचारीहरूले कार्यालयको कामकाज ठप्प गरी विरोध गरे । कुटाइबाट घाइते अमिन मोतीलालको सिटी स्
पुरानो भारतीय नोटसहित भगत पक्राउ
प्रस, वीरगंज, १८ चैत/ सशस्त्र प्रहरी बल राजस्व तथा भंसार सुरक्षा गुल्म वीरगंजले सूचनाको आधारमा पुरानो भारतीय नोटसहित एकजनालाई पक्राउ गरेको छ । भारत मधुबनी निवासी दिनेश भगत पक्राउ परेका हुन् । पक्राउ परेका भगतसहित प्रहरीले १००० र ५०० को ९ लाख ९१ हजार रकम बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा कार्यालय, पर्साले जनाएको छ । भारत सरकारले कालो धन नियन्त्रणको लागि रु १००० र ५०० को नोट चलनचल्तीमा रोक लगाएको थियो । भारत सरकारले रोक लगाए पनि भारतीय जनतासँग रहेको रकम साटन ३१ मार्चसम्म म्याद तोकेको थियो । पक्राउ परेका पुरानो नोट भारतीय बैंकमा नसाटेर नेपाल ल्याउने कारणबारे प्रहरीले खोजबिन शुरु गरेको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार बरामद पुराना भारतीय नोट कालो धन रहेको कारण नेपाल भिœयाउन खोजिएको हो । भारतबाट आएको उच्चस्तरीय टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत नेपाली जनतासँग रहेको पुराना भारतीय नोट साटने प्रक्रिया अगाडि बढाएको बेला सो रकम भारतबाट नेपाल भिœयाउन खोजेको देखिन्छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार पक्राउ परेपछि मात्र पुराना नोटबारे घटना सार्वजनिक भएको हो । यस अघि कतिजनाले कति रकम नेपाल भिœयाएको
म्यादी प्रहरीमा मागभन्दा दोब्बर निवेदन, दुई सय महिला
प्रस, वीरगंज, १८ चैत/ स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आह्वान गरिएको म्यादी प्रहरीको भर्नामा मागभन्दा दोब्बर आवेदन परेको छ। म्यादी प्रहरीका लागि दुइ हजार नौ सय १६ पुरुष र २ सय ५ महिला गरी कुल ३ हजार १ सय २१ जनाले आवेदन दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साले जनाएको छ । बारामा ४ हजार २ सय ८४ पुरुष र दुइ सय १० महिला गरी कुल चार हजार चार सय ९४ जनाले म्यादी प्रहरीका लागि आवेदन दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाराका प्रहरी निरीक्षक अरुण कुशवाहाले बताएका छन् । आवेदन दिनेहरूमध्ये भोलिदेखि देखि सोमवारसम्म छनोट गरिने र छनोटको नतिजा आगामी मङ्गलवार प्रकाशित गरिने जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साले जनाएको छ । त्यस्तै म्यादी प्रहरीमा छनोट भएकाहरूलाई चैत २५ गतेदेखि वैशाख ८ गतेसम्म साधारण तालिम हुने र त्यसपछि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा उनीहरूलाई खटाउने जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साले जनाएको छ । म्यादी प्रहरीको अवधि ५५ दिनको हुने नेपाल प्रहरीले जनाएको छ ।
– समीर पाख्रिन दर्केपानी गाउँपालिकामा पनि चुनावको आगमनले निकै चहलपहल बढेको थियो । हिजोसम्म बा¥हमासे खेलेर दिन काटने लाठेहरू विभिन्न दलमा आबद्ध भई चुनावप्रचार–प्रसारमा लागेका थिए । हुन पनि बिहानको नास्तालगायत दिउँसो–बेलुकी मासुभात खान र टिल्ल मात्न पाएपछि अरू के चाहियो ? चुनाव नजिकिंदै जाँदा विभिन्न दलका नेता–कार्यकर्ताहरू बेला–कुबेला घर दैलोमा आएर भोट माग्न थालेका थिए भने कोही चाहिं हातमा लाठो बोकेर खबरदार भोट हाल्न जाने होइन भन्दै तर्साउन आउने गरेका थिए । कतिपय त गोठमा गयो गोठैमैं पुग्ने, खेतबारीमा गयो खेतबारीमैं पुगेर भोट माग्ने गरेकाले होला मतदाताहरू आजित भएका थिए। एकदिनको कुरा, सोही गाउँपालिकाका बुज्रुक गोलेजेठा आँगनमा बसेर चिया पिउँदै थिए । गाउँपालिकाका अध्यक्षको युवा प्रत्यासी विकासप्रेमी आप्mनो दलबलसहित आँगनमा देखा परे । अनि गोलेजेठालाई बढो आदरका साथ हात जोडेर भने –“नमस्ते गोले आसे, तपाईंलाई त थाहा नै छ । म यो दर्केपानी गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदका लागि चुनाव लडदै छु । मेरो चिह्न मोबाइल हो । आसेगाउँको बुज्रुक होइसिन्छ । हजूरको भोट त मेरै मोबाइलमा खस्नुपर्छ है । मोबाइलमा
उमाशङ्कर द्विवेदी अर्जुनले भनेका थिए– “एक दिन पूर्वाह्नमा म जप गरी सिध्याएर बसेको थिए, यतिकैमा एकजना ब्राह्मण आएर मसित सोधे– अर्जुन तपाईंले दुष्कर काम गर्नुपर्नेछ, आप्mना शत्रुहरूसित युद्ध गर्नुछ । यस्तोमा उच्चैश्रवा घोडामाथि हातमा बज्र लिएर बसेका इन्द्र तपाईंका शत्रुहरूको नाश गर्दै अघि–अघि हिंडून् अथवा सुग्रीव आदि घोडाहरूले युक्त दिव्य रथमाथि बसेर भगवान् श्रीकृष्ण तपाईंको रक्षा गर्दै पछि–पछि हिंडून ? त्यति बेला मैले बज्रपाणी इन्द्रलाई छाडेर यस युद्धमा सहायकको रूपमा श्रीकृष्णलाई नै रोजें । यसप्रकार त्यस युद्धमा यी डाँकाहरूको वध गर्नाका लागि सहायकको रूपमा मैले श्रीकृष्णलाई पाएँ । श्रीकृष्णले युद्ध न गरून् तर यदि उनले मनले कसैको जयको कामना गर्छन् भने उसले अवश्य नै आप्mना शत्रुहरूको नाश गर्न सक्नेछ, देउता वा इन्द्र नै शत्रु भए पनि । अनि मान्छेको त के कुरा ? श्रीकृष्णले आकाशचारी सौभयानका स्वामी महाभयङ्कर र मायावी राजा शाल्वसित युद्ध गरेका थिए र सौभको दैंलोमैं शाल्वले हानेको शतघ्नी अस्त्रलाई हातले नै समातेका थिए । श्रीकृष्णको यस्तो महान् वेगलाई कुन मानिसले सहन गर्न सक्दछ र ?” “म र
हामी विदेशमा पनि विभाजित
विश्वराज अधिकारी रमेश दाइ मेरो कोठामा पस्नुभएको मात्र के थियो, मतिर हेर्दै भन्नुभयो–“के यस्तो अचम्म देख्नुपरेको होला ? एक दिन दुई दिन हो, आज छैठौं दिन भइसक्यो माओवादीले अनिश्चितकालीन नेपाल बन्द गरेको र जुलुस प्रदर्शनका लागि हजारौ मानिसलाई ल्याएको, देशभरिका जनतालाई काठमाडौंमा थुपारेको । देशभरिका जनताले कति दुःख पाइरहेको छ, त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन । यात्रीहरू गन्तव्यमा पुग्न सकिरहेका छैनन् । बिरामीहरूलाई अस्पताल पुग्न गा¥हो छ । कृषकहरूले तरकारी बिक्री गर्न नपाएर तरकारी सडकमा फाल्दै छन् । विद्यार्थीहरू स्कूल जान नपाएर घरमैं थन्किएर बसेका छन् । दैनिक मजदूरीको भरमा पेट पाल्नेहरू खान नपाएर यताउता भौतारिंदैछन् । यो आम हडतालले गर्दा यहाँसम्म कि कतिले त आप्mना बाबुआमाको इलाज गराउन पाएनन्, मरेपछि घरमा पुगेर काजक्रिया पनि गर्न पाएनन् । करोडौं नेपालीको जीवन अति नै कष्टकर भएको छ । केवल दुईचार नेताको महत्वाकाङ्क्षा पूरा गर्नका लागि नेपालीहरू स्वतन्त्र देशका नागरिक भएर पनि अनेक किसिमका दुःख र पीडा बोकेर, घरभित्र कुँजिएर, डर र त्रासको वातावरणमा बन्दीझै जीवन बाँच्न बाध्य भएका छन् । बाध्य पन
स्वाधीन नैतिकताको विकास होला ?
सञ्जय मित्र मानव हुनु भनेको स्वतन्त्र हुनु पनि हो । मानव जातैले स्वतन्त्रता रुचाउने प्राणी हो । मानवमा जति धेरै चेतनाको वृद्धि हुँदै जान्छ उसमा स्वतन्त्रताको भावना र स्वतन्त्रताको उपयोगको तरिका पनि बढ्दै जान्छ । मानिसमा जति थोरै चेतना हुन्छ उति धेरै पराधीन हुन्छ भनिन्छ । स्वतन्त्रता व्यक्तिगत हुन्छ । हरेक व्यक्तिले स्वतन्त्रताको अलग अनुभूति गर्दछ, यसैले स्वतन्त्रतालाई व्यक्तिगत सम्पत्ति पनि मानिएको हुन सक्छ । स्वतन्त्रता सामूहिक हुन्छ भनी मान्नेहरूको तर्कमा जब समूह वा समुदायले यथार्थ स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न थाल्दछ मानिसले वास्तविक स्वतन्त्रता पाएको हुन्छ । दुवै तर्कका आआप्mना विशेषता छन् । दुवै तर्क आप्mनो ठाउँमा सही हुनुपर्छ । दुवैले मानिसकै स्वतन्त्रताको वकालत गरेको हो । यसकारण दुवैमा मानवीय सर्वोच्चता रहेको छ । मानवभन्दा पर दुवैमध्ये कुनैले पनि सोचेको देखिएको छैन । मानिस तबसम्म स्वतन्त्र छ, जबसम्म उसले अरूको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दछ । पश्चिमा जगत्ले हामीभन्दा पहिलेदेखि नै बढी व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको स्वाद लिइरहेको र समाजमा स्वतन्त्रताको वकालत गरिरहेको आधारमा हामी
नया बाधा, पुराना नाता
चन्द्रकिशोर संसार सिमानाहीन भइरहेको बेला नेपालको दक्षिणी सीमा जो इतिहासको नासोको रूपमा खुला प्राप्त भएको छ, त्यो सीमाका सम्बन्धमा अचेल सीमाञ्चलका बासिन्दाहरू माझ बहस उठिरहेको छ— अबको सीमाञ्चल सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ? त्यसले देखाउँछ सीमाञ्चल सम्बन्धका भावनात्मक आधारहरू मात्र पर्याप्त छैनन् । नेपाल वा भारतको आँखाबाट सीमाञ्चल सम्बन्ध अब पुरानो सुरक्षा अवधारणाभित्र नअट्ने भएको छ । खुला सीमालाई वरदानको रूपमा कसरी जोगाउने अहिलेको मुख्य चुनौती हो । सीमा क्षेत्रमा देखापरेका जोखिमहरूलाई कसरी न्यून गर्ने, दुवैतिरको कार्यभार हो । सीमा सम्बन्धमा देखा पर्देै गएको अवरोध र त्यसको नियमनका लागि गरिने सैन्य प्रयासको मानसिकताले गर्दा सीमाञ्चल क्षेत्रमा पर्ने सामाजिक, आर्थिक असरहरूबारे अहिले पनि नेपाली पक्षमा चिन्ता र चासो देखिएको छैन । मिडियाका विभिन्न माध्यमहरूबाट जे–जति घटनाहरूका बेहोरा बाहिर ल्याइएको छ, त्यसले प्रस्ट गर्दैछ सीमाञ्चलका सम्बन्धमा हस्तक्षेप गर्ने गरी केही प्रवृत्तिहरू शक्तिशाली रूपमा उदाइरहेका छन् । सीमाञ्चलमा देखा परिरहेका समस्याहरू राजनीतिक नाराबाजीको साधन मात्र बन्नुहँुदै
चुनावले तताउँदै छ, बेथिति बसाउँदैछ– सुध्रिने कहिले हो ?
वैद्यनाथ ठाकुर सयकडौंं वर्षदेखि समाजमा चल्दै आएको सामन्तवाद विभिन्न क्ष्Fेत्रमा संस्कृति र संस्कारकै रूप धारण गरिसकेको हुनाले यसबाट छुटकारा पाउन निकै कठिन मात्र होइन चुनौतीपूर्ण पनि छ । प्रकृतिमा परिवर्तन अनिवार्य र अवश्यंभावी छ । परिवर्तन वस्तुको मूल चरित्र नै हो । परिवर्तनको धारबाट कोही पनि अछूतो रहन सक्दैन । मानव समाजभित्र देखिने सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिवर्तन पनि गतिशीलताको द्योतक हो । परिवर्तनको यही चरित्रले मानव समाज विभिन्न आरोह–अवरोह पार गरी यहाँसम्म आइपुगेको छ । नेपाली समाजको रूपान्तरणको प्रक्रिया अझै सङ्क्रमणकालबाट मुक्त भइसकेको छैन । अठार वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय निकायको चुनाव वैशाख ३१ गते हुने भएको छ । पहाड, तराई सबैतिर राजनीतिक चहलपहल बढ्दै छ । मधेसको मुद्दा अझै संसद्मा पेन्डिङ भएको हुनाले अपेक्षाकृत कम चुनावी चहलपहल तराईमा देखिन्छ । सङ्घीयताको स्थापनाको लागि एक सयभन्दा बढी मधेसी युवाले रगत बगाइसकेको भए तापनि अझै प्रदेशहरूको सीमाङ्कनको विषय स्पष्ट हुन नसक्नु दुःखद कुरा हो । संसद्मा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लगेर टुङ्ग्याई निर
कृषिप्रधान हाम्रो देशमा सरकारले भर्खर किसानहरूलाई लक्षित गरेर कृषि बिमा योजना लागू गरेको छ । कृषि बिमाका लागि सरकारले किसानहरूको आकर्षण बढाउन बिमा गराउनेलाई ७५ प्रतिशतसम्मको अनुदान घोषणा गरेको छ । बर्सेनि किसानहरू विभिन्न कारणले मर्कामा पर्दै आएको कुरालाई दृष्टिगत गरेर सरकारले किसानलाई हुने घाटा न्यूनीकरण गर्न कृषि बिमा योजना लागू गरेको हो । धान, गहुँ, तोरी, केरा, उखुजस्ता बाली र गाई, भैंसी र बाख्राको पनि बिमा गरिन्छ । कृषि बिमाबारे वीरगंजका बिमा कम्पनीहरूले खासै प्रचारप्रसार गरेका छैनन् । कृषि बिमा गर्दा बिमा कम्पनीलाई खासै मुनाफा नआउने र अनुदानको लागि सरकारको बाटो कुर्नुपर्ने अनि क्षतिपूर्तिका लागि किसानको कुरा सुन्नुपर्ने भएकोले बिमा कम्पनीहरूले यो बिमामा खासै रुचि देखाएका छैनन् । बिमा कम्पनीहरूले रुचि नदेखाए पनि कृषि र पशु कार्यालयले किसानहरूलाई कृषि बिमाबारे जानकारी गराउनुपर्ने हो । तर कृषि र पशु कार्यालयले पनि झारा टार्ने मात्र काम गरिरहेका छन् । पर्सालगायत तराईका जिल्लामा भर्खर असिनाले गहुँ, दाल, तोरी, मकै अनि तरकारी खेतीमा क्षति पु¥यायो । किसानहरूले सरकारसँग राहत माग गर
२०७३ चैत १८ गते शुक्रवारको प्रतीक दैनिक
निर्जीवन बिमामा किसानको आकर्षण घट्दो सरकारको अनुदान धेरैलाई थाहा छैन
प्रस, परवानीपुर, १५ चैत/ बिमा खासगरी जीवन तथा निर्जीवन गरी दुई किसिमको हुन्छ । जीवन बिमा गर्ने जम्मा कम्पनी सातवटा छन् भने निर्जीवन बिमा गर्ने कम्पनी वीरगंजमा १७ वटा छन् । पर्सामा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई सरकारले कृषि बिमाका लागि ७५ प्रतिशत अनुदान दिए तापनि किसानहरूले खासै चासो देखाएका छैनन् । कतिलाई त गाईभैंसी, बाख्रा, धान, गहुँ, तेलहन, केराखेती, उखु खेतीलगायतको बिमा हुन्छ भन्ने जानकारी नरहेको वीरगंजका निर्जीवन बिमा कम्पनीले जनाएका छन् । प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका वीरगंज प्रबन्धक अमर गौतमका अनुसार निर्जीवन अन्तर्गत वीरगंजमा मोटर बिमा (सवारी साधनको बिमा), अग्नि बिमा (भूकम्प, आगलागी, हुलदङ्गा, तोडफोड, आतङ्कवादसँग सम्बन्धित घटनाको लागि गरिने बिमा), समुद्री बिमा ।व्यक्तिगत दुर्घटना बिमा तथा कृषि बिमा गर्ने गरिएको बताउँछन् । अन्य निर्जीवन बिमाको सन्तोषजनक अवस्था रहे पनि कृषि बिमातर्फ पर्सा, बारामा उत्साहपूर्ण कारोबार देखिएको छैन गौतमको भनाइ छ । कृषि बिमाको उद्देश्य प्रत्यक्ष्F छ । कृषि बिमाको उद्देश्य सरकारले किसानको बालीनालीलाई सहयोग गर्नु हो । कृषिमा बाली
सीमासँग जोडिएका वर्गका लागि साढे ८ करोड बजेट
प्रस, परवानीपुर, १७ चैत/ वीरगंज उपमहानगरपालिकाको ५ वटा वडा र १७ गाविसको लागि सरकारले रु साढे ८ करोड बजेट यस चालू आवको लागि विनियोजन गरेको छ । भारतीय सीमासँग जोडिएका वडा तथा गाविसको सीमान्तकृत वर्गको जीवनस्तर उकास्न सरकारले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सो बजेट खर्च गर्न पर्सा जिल्ला समन्वय समितिलाई जिम्मा दिएको छ । सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम नामक योजना अन्तर्गत मन्त्रलायले छुट्टै जिल्ला समन्वय समिति कार्यालय, पर्सामा खोलेर कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको इन्जिनियर रविशेषकुमार झाले बताए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षदेखि २०७७/०७८ सम्म सरकारले ५ वर्षको लागि नेपालको २० वटा जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू गरेको छ । २० वटा जिल्लाका लागि सरकारले करिब रु २ अर्ब खर्च गर्दैछ । जसमा पर्सामा मात्र रु साढे ८ करोड परेको उनले बताए । गत आर्थिक वर्षमा फिल्ड सर्भे, लगत तयार, योजना छनोट, कर्मचारी खटाउनेलगायत कार्यको लागि पर्सामा रु २ करोड बजेट दिएको थियो । यस वर्ष वीरगंज उपमहानगरपालिकाको वडा नं १, १९, २०, २२ र २८ गरी कुल ५ वटा वडा र गाविसमा अमरपट्टी, घोडदौडापिपरा, जयमङ
नापीका अमिन मोतीलालमाथि हातपात, दुईजना पक्राउ
प्रस, वीरगंज, १७ चैत/ मेन्टेनेन्स नापी शाखा, वीरगंजका अमिन र कार्यालय सहायकलाई केही युवाहरूले कार्यालय हाताभित्र कुटपिट गरेका छन् । आज दिउँसो सो कार्यालयमा ४–५ युवाहरूले अमिन मोतीलाल साहलाई तल बोलाएर कुटपिट गरेको प्रत्यक्षदर्शीले बताए । ४–५ जनाको सङ्ख्यामा रहेका युवाहरूले हेलमेट र मुक्काले कुटपिट गरेका थिए । कुटपिट गरेर उनीहरू फरार भएको बताइएको छ । कुटपिट गर्ने क्रममा अमिनलाई बचाउन जाँदा कार्यालय सहायक रियाज अहमदलाई पनि कुटपिट गरिएको बताइएको छ । यसैगरी स्थानीय युवक बलराम खनाललाई पनि युवकहरूले अमिनलाई जोगाउन गएको भनी हातपात गरेका थिए । प्रारम्भिक सूचना अनुसार मोही सम्बन्धी कुरालाई लिएर असन्तोष पक्षले कुटपिट गरेको बताइएको छ । प्रहरीले घटनामा संलग्न रहेको आशङ्कामा दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा महुवनका आशेतेश्वर यादव, अलौका रामविनय यादव रहेको वप्रका, विर्ताका प्रनि अनिश कर्णले बताए ।
ग्याँस उद्योग व्यवसाय
ई. गोपाल श्रेष्ठ वर्तमान नेपालमा ग्याँस उद्योग व्यवसायमध्ये भान्छाको ग्यास एलपीजी को उद्योग व्यवसाय फस्टाएको छ । एउटा प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार नेपालले वार्षिक ६३ अर्बको एलपीजी आयात गरिरहेछ । यो ग्याँस नेपालमा उत्पादन नगरी केवल सिलिन्डरमा भरी बिक्रीको लागि वजारमा पठाउने काम भईरहेछ । एलपीजी पछिको दोस्रो ठूलो परिमाणमा बिक्री हुने ग्याँस अक्सिजन हो । अक्सिजन भने नेपालमा नै उत्पादन भइरहेको छ । अक्सिजनको प्रयोग अस्पताल तथा उद्योगमा भइरहेको छ । अस्पतालमा विशेष गरी श्वास लिन तथा प्ँmयाक्न गा¥हो भइरहेको बिरामीको उपचारको लागि अक्सिजन प्रयोग भइरहेको छ भने उद्योगहरूमा फलाम/स्टीलहरू जोड्न/वेल्डिड्ढो काममा र फलाम/स्टीलका मोटा–मोटा पाता सिट काट्न/टुक्रा गर्न प्रयोग भइरहेको छ । अक्सिजनलाई उद्योगको काममा प्रयोगमा ल्याउदा अर्को एउटा ग्याँस पनि चाहिन्छ जसलाई हामी ब्अभतथभिलभ भन्छौं । यो ग्याँस भने हामीले उत्पादन नगरी आयात नै गर्दछौं । सानो परिमाण भए पनि हामी तरल नाइट्रोजन र नाइट्रोजन ग्याँस पनि उत्पादन गरिरहेका छौं । तरल नाइट्रोजन पशुको कृत्रिम गर्भाधारण सम्बन्धी काममा प्रयोग भइरहेको छ भने ग्याँस
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण र विदेशी लगानीको आमन्त्रण
शीतल महतो नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल एक साता लामो चीन भ्रमण गरेर बुधवार स्वदेश फर्किएका छन् । भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा चिनियाँ लगानी भिœयाउन बिशेष कूटनीति पहल गरेको छ । फलस्वरूप चीनका राष्ट्रपति जिनपिङ सीले लामो समयदेखि बन्द रहेको तातोपानी भन्सार नाका खोल्ने विषयलाई नजिकबाट अध्ययन गरिरहेको र चाँडै खोल्ने आश्वासन दिएका छन् । उनले नेपालसँगको व्यापार सहज बनाउन रसुवागढी नाकाको स्तरोन्नति गर्ने आश्वासन पनि दिए । सीमा वारपार आर्थिक क्षेत्र विकास, उर्जा सहयोग संयन्त्र स्थापना र रसुवागढी स्याफ्रुबेंसी सडकको स्तरोन्नतिबारे जतिसक्दो चाँडो समझदारीका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने सहमति भएको पनि प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । सीमा वारपार आर्थिक क्षेत्र विकास, उर्जा सहयोग संयन्त्र स्थापना र रसुवागढी स्याफ्रुबेंसी सडकको स्तरोन्नतिका सम्बन्धमा हाल दुवै देश वार्ताका क्रममा छन् । चिनियाँ राष्ट्रपतिले अघि सारेका ‘वान बेल्ट वान रोड’ प्रक्रियामा नेपालले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धतासमेत प्रधानमन्त्री दाहालले जनाएको छ । यसबाट नेपालमा रेलमार्ग
विश्वराज अधिकारी संयुक्त राज्य अमेरिका राजनैतिक क्षेत्रमा मात्र विश्वमा अग्रणी स्थानमा छैन, आर्थिक क्षेत्रमा पनि अग्रणी स्थानमा छ । आर्थिक क्षेत्रमा अग्रणी स्थानमा भएको हुनाले नै राजनैतिकरूपमा पनि अग्रणी स्थानमा हुन पुगेको हो । राजनैतिक र आर्थिक दुवै क्षेत्रमा नै अग्रणी स्थानमा रहेकोले अमेरिकाले यो विश्वलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने क्षमता राखेको हो । सोभियत सङ्घको विघटन र शीतयुद्धको समाप्ति पछि अमेरिकाले एकलरूपमा विश्वलाई नेतृत्व गर्दै आइरहेको छ । विश्वको एक मात्र अप्रतिस्पर्धी महाशक्ति हुन पुगेको हो । अमेरिकाले प्राप्त गरेको यो अग्रणी स्थान आउने पचास वर्षसम्म पनि अन्य कुनै राष्ट्रले प्राप्त गर्ने सम्भावना देखिंदैन । अनुमान वा तर्क गर्नेहरू भारत, चीन वा रूस अमेरिकाको यो अग्रणी स्थानलाई चमत्कारी किसिमले आर्थिक प्रगति गरेर विस्थापित गर्न सक्छन् भन्छन् । तर यो भनाइलाई पृष्टि गर्ने आर्थिक आधार यी राष्ट्रहरूसँग देखिएको छैन । आर्थिक प्रगतिका लागि केवल प्राकृतिक साधन, धन सम्पत्ति भएर मात्र हुँदैन । आर्थिक प्रगतिका लागि एउटा सबल ‘बजार संस्कृति’ आवश्यक हुन्छ । रूस, चीन र भारत यी तीनै राष्
परीक्षा सरल हुनुप¥यो
पुरानो फलामे ढोकाको रूपमा परिभाषित स्कूल लिभिङ्ग सर्टिफिकेट (एसएलसी) यसवर्षदेखि रुपान्तरित भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) पर्सा जिल्लामा बाहिरी आवरण जति शान्तिपूर्ण देखाइयो भित्री तह उजागर हुँदा त्यत्तिकै त्रुटिपूर्ण पाइएको छ । गत वर्षदेखि एसएलसीमा ग्रेडिङ्ग प्रणाली लागू भएपछि विद्यार्थीहरूमा अनुत्तीर्णको गुञ्जाइस रहेन् । विद्यार्थीहरू अनुत्तीर्ण नहुने भएपछि चिट समात्ने प्रवृत्तिमा पनि कमी आयो । गत वर्ष र यस वर्ष पर्सा जिल्लाबाट एकजना विद्यार्थी कारवाइमा परेनन् । परीक्षा अमर्यादित बनाएको कसूरमा भने ६ जना दोषी पाए तर कारबाइ भने आधालाई मात्र गरियो । तीनजना निरीक्षक कारवाइमा परे तीनजनाले उन्मुक्ति पाए । उन्मुक्ति पाउने निजी विद्यालयका शिक्षक हुन् । यसपटकको एसइई मर्यादित बनाउनका लागि गतवर्ष झै जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अलावा शिक्षा समिति, शिक्षक सङ्घ, सङ्गठनका पदाधिकारी सदस्य, नेपाली सेना बाहेकका सुरक्षा निकाय सम्मिलित ९ वटा अनुगमन समिति खटे । पोखरिया र मसिहानीमा परीक्षा अमर्यादित पार्ने काममा संलग्न तीनजना निरीक्षकलाई कारवाइ भयो । तर निरीक्षकले परीक्षा दिने त होइन् । उनीहरूले
२०७३ चैत १७ गते बिहीवारको प्रतीक दैनिक
एसइई साँच्चै शान्तिपूर्ण सम्पन्न भएको हो ?
एसइई परीक्षामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले आप्mना छोराछोरीहरूलाई संस्थागत विद्यालयमा पढाएर सामुदायिकबाट परीक्षा दिलाएको सन्दर्भ छात्रवृत्तिको लागि भएको खुलासा भएको छ । रौतहटका जिशिअ रामविनय सिंह, बाराका अशोक रौनियारले आप्mनी छोरी र छोरालाई वीरगंजको बोर्डिङ स्कूलमा पढाएर एसइईको परीक्षा बकुलियाबाट दिलाएको सन्दर्भमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट छानबिन शुरु भएको छ । यी दुईलगायत करिब १४ जनाले यस्तो कार्य गरेको गुनासो छ । खासगरी संस्थागतमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूले नेपाल सरकारमार्पmत् विदेशमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्दा अवसर नपाउने हुनाले संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गराएर सामुदायिक विद्यालयबाट परीक्षा दिलाउने काम गरेको शिक्षा कार्यालयका एकजना कर्मचारीले बताए । संस्थागत विद्यालयमा नाम रजिस्टर नगरेर अध्ययन गराउने र सामुदायिक विद्यालयबाट परीक्षासम्मको सम्पूर्ण गतिविधिहरू रजिस्टर गराउने काम भएको बताइएको छ । अनुसन्धानबाट कागजीरूपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको उनीहरूको प्रमाण फेला पर्छ । तर ती विद्यालयका विद्यार्थी, शिक्षकहरूसँग यस्ता विद्यार्थीहरूबारे सो
अख्तियारद्वारा बारामा नायबसुब्बा पक्राउ
शिवशङ्कर मिश्र, कलैया, १६ चैत्र/ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्षेत्रीय कार्यालय, हेटौडाबाट खटेको टोलीले बुधवार दिउँसो सेवाग्राहीसँग घुस लिदै गर्दा भूमिसुधार कार्यालय कलैयाका नायबसुब्बा विश्वनाथ प्रसाद यादवलाई रङ्गेहात पक्राउ गरेको छ । अख्तियारका प्रहरी नायब उपरीक्षक महेन्द्र खडकाको कमान्डमा खटेको टोलीले भूमिसुधार कार्यालयमैं सेवाग्राहीसँग १५ हजार रुपियाँ घूस लिंदै गर्दा रङ्गेहात पक्राउ गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्षेत्रीय कार्यालय, हेटौंडाले जनाएको छ । पक्राउ परेका यादवलाई थप अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिई आजै हेटौंडा लगिएको छ । यस अघि नापी कार्यालय, बाराका सर्वेक्षक राधेश्याम साहलाई सेवाग्रहीसँग ५ हजार घूस लिइरहेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको थियो ।
प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा बबिताको हत्यामा पतिकै संलग्नता
प्रस, वीरगंज, १६ चैत/ वीउमनपा, रामगढवा टोलमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी बबिता पडितको हत्यामा पति अमरेन्द्र पडित नै संलग्न रहेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उल्लेख छ । बबिताको बारा, परसौनी–८, नौतन टोलको उत्तरतर्पm रहेको सिंघाही नदीको किनारमा गत सोमवार बिहान शव भेटिएको थियो । मृतक बबिताका बुवा सर्लाही, सिसौट निवासी नागेन्द्र पडितले हिजो शव बुझी दाहसंस्कार गरेको बारा प्रहरीले जनाएको छ । शुक्रवारसम्म उपस्वास्थ्यचौकी रामगढवामा काम गरेपछि बबिता बेपत्ता भएकी थिइन् । प्रहरीलाई प्राप्त सूचना अनुसार पति अमरेन्द्र प्रत्येक शुक्रवार वीरगंज छोरी र पत्नीलाई भेटन आउने गरेको र आइतवार बिहान घर फर्कने गरेको घरधनीको माध्यमबाट खुलेको छ । तर घटनाको दिन अमरेन्द्र आएको र ५ वर्षीया तेजल पडितलाई सोही दिन कोठाबाट लिएर गएको घरधनीले प्रहरीलाई जानकारी गराएको छ । ५ वर्षीया छोरीसँग बस्दै आएकी बबिताको हत्याको दिन छोरी कसरी आप्mनो घर सर्लाही, सिसौटिया पुगिन् प्रहरीले अनुसन्धान शुरु गरेको छ । घटनाको दिनदेखि नै प्रहरीले बबिताको पतिलाई जानकारी गराए पनि उनी कलैया आउन नचाहेको प्रहरी स्रोतबाट जानकारी प्राप्त भएक
ब्रह्मास्त्र दैनिकका सम्पादक यादवको निधन
प्रस, वीरगंज, १६ चैत/ वीरगंजबाट प्रकाशित हुने ब्रह्मास्त्र दैनिकका प्रधानसम्पादक काशीनाथ यादवको आज साँझ काठमाडौंमा उपचारको क्रममा ५७ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । एक साता अघि वीरगंजमा मस्तिष्कघात भई काठमाडौंको नर्भिक अस्पतालमा उपचार गराउँदै आएका यादवको निधन भएको परिवारजनले बताएको छ । उनलाई उच्च रक्तचापका कारण गत साता मस्तिष्कघात भएको थियो । यादवको निधनप्रति नेपाल पत्रकार महासङ्घ पर्साका अध्यक्ष श्याम बन्जाराले सम्पूर्ण पर्सेली सञ्चारकर्मी शोकमा रहेको बताउँदै संवेदना प्रकट गरेका छन् ।
निर्वाचन किन आवश्यक
निर्वाचन लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई निरन्तरता दिने एउटा माध्यम हो । कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थामा अनुकूल नियमितता भएन भने समाजमा अराजकता उत्पन्न हुन्छ । नेपालमा सबै तहको निर्वाचन नभएको झन्डै दुई दशक हुन लाग्यो । यसले देशभरि नै आर्थिक अनियमितता, राजनीतिक उच्छृङ्खलता, सामाजिक विभेद जन्माएको हामीले टडकारो देखिरहेका छौं । तर नेपालमा भने निषेधको राजनीति हावी छ । पहिले ठूला दलहरूले निषेधको राजनीति गरे, अहिले मधेसी दलहरू निषेधको राजनीति गर्न पोख्त हुँदै गएका छन् । निषेधको राजनीति गर्नेले शासन व्यवस्था चलाउन जान्दैन । अवसर पायो भने पनि सत्ता सञ्चालन गर्न सक्दैन । निषेधको राजनीति वा मनोवृत्तिले जहिले पनि अवरोधको मार्ग रोज्छ । शासन सञ्चालन भनेको चाहिं गमन–अग्रगमन हो । त्यसैले निषेधको राजनीतिमा जतिकै अब्बल देखिएको राजनीतिक दल वा समूहले अवसर पाएपछि शासन सञ्चालन गर्न सकेको इतिहास छैन । राजनीतिमा मुद्दामा भिन्नता हुन सक्छ–हुनुपर्छ, तर अभ्यासमा निरन्तरता पहिलो शर्त हो । लोकतन्त्रमा जनताको भावना बुझ्न, निर्वाचन पहिलो र अन्तिम माध्यम हो । निर्वाचनमा नजानु त्यसैले प्रकारान्तरमा निर्वाचनबाट डराएको मान
२०७३ चैत १६ गते बुधवारको प्रतीक दैनिक
जनता रिझाउन गाउँ पस्दै दल
प्रस, पथलैया, १५ चैत/ संविधानसभा दोस्रो निर्वाचनपछि शहर केन्द्रित राजनीतिक दल यतिबेला गाउँ पस्न थालेका छन् । सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गर्दै तयारी थालेपछि दलहरू गाउँ पस्न थालेका हुन् । तीन वर्ष अघि सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनपछि गाउँ जान छाडेका राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा बढी भेटिने गरेका छन् । वैशाख ३१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै गाउँ पसेका दल जनता रिझाउन निकै सक्रिय देखिन्छन् । आप्mनो पक्षमा मत बटुल्ने प्रयासस्वरूप राजनीतिक दलहरू अहिले गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको विभिन्न वडामा कमिटी गठन–पुनर्गठनमा व्यस्त छन् । त्यति मात्र नभई पार्टीलाई निकै सक्रिय रहेको देखाउन दैनिक विभिन्न कार्यक्रम लिएर दलका नेता गाउँ पुगिरहेको देख्न थालिएको छ । दलको सक्रियताका कारण शहरभन्दा गाउँमा चुनावको रौनक बढेको देखिन्छ । “अघिल्लो चुनावपछि अनुहारै नदेखाएका सबै दलका नेताहरू अहिले गाउँमा झुम्मिएका छन् । यो चुनावको सङ्केत हो”–मनहर्वाका हरेन्द्र चौधरीले भने–“चुनाव आएपछि नेताहरू यसरी नै जनता फकाउने र मत बटुल्ने गर्दछन् । तर चुनावप
ठूलो परिमाणमा गाँजा–चरेससहित चारजना पक्राउ
प्रस, वीरगंज, १५ चैत/ मकवानपुर प्रहरीले ठूलो परिमाणमा गाँजा र चरेससहित चारजनालाई पक्राउ गरेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय मनहरीका प्रनानि विजय बानियाँको नेतृत्वमा खटेको प्रहरीले हाल मनहरी गाउँपालिका–६ स्थित जङ्गलमा लुकेर बसेको अवस्थामा आज बिहान ४२ बोरा अन्दाजी साढे ५ सय केजी गाँजा र दुई बोरा चरेस अन्दाजी ४५ केजीसहित चारजनालाई पक्राउ गरेको जिप्रका मकवानपुरका प्रवक्ता प्रनाउ वामदेव गौतमले बताए । प्रवक्ता गौतमले गाँजा तस्करहरूलाई पक्रने क्रममा प्रहरीले केही राउन्ड गोली फायर गर्नुपरेको बताएका छन् । गोली फायरिङपनि भाग्ने क्रममा चरस, गाँजासहित चारजनालाई पक्राउ गर्न प्रहरी सफल भएको उनले बताए । पक्राउ पर्नेमा मनहरी गाउँपालिका–७ बस्ने १६ वर्षीय दीपेन्द्र राई, वडा नं. ६ बस्ने २९ वर्षीय सुरेश स्याङतान, वडा नं. ८ बस्ने १८ वर्षीय कृष्ण तामाङ र रासक्सराङ्ग गाउँपालिका–८ बस्ने ३६ वर्षीय गोपाल ब्लोन रहेका छन् । पक्राउ परेका अभियुक्तहरूसँग थप अनुसन्धान भइरहेको र उनीहरूमाथि लागूऔषध सम्बन्धी मुद्दा चलाइने प्रवक्ता गौतमले बताए ।
बोरामा कोचेकोे शवको पहिचान खुल्यो
प्रस, वीरगंज, १५ चैत/ बारा, परसौनी–८, नौतन टोलको उत्तरपट्टी सिंघिया खोलाको किनारबाट बरामद शवको पहिचान भएको छ। मृतक सर्लाही, सिसवटिया निवासी बबिता पडित रहेको बारा प्रहरीले जनाएको छ । मृतक पडित वीरगंज उपमहानगरपालिका रामगढवा टोलमा रहेको उपस्वास्थ्य चौकीका अहेब रहेको प्रहरी निरीक्ष्Fक अरुण कुशवाहाले बताएका छन् । आइतवार बिहान नौतन टोलभन्दा दुई किलोमिटर उत्तरमा रहेको नदीको डिलमा बोरामा कसेको अवस्थामा पडितको शव प्रहरीले बरामद गरेको थियो । खेतमा काम गर्न गएका व्यक्तिहरूले सो शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेपछि घटना सार्वजनिक भएको थियो । मृतक पडितको घाँटीमा डोरी र टाउकोमा नीलडाम रहेको प्रहरीको अनुसन्धानमा उल्लेख छ । मृतकको पहिचान भए पनि घटनामा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूको खोजी भइरहेको प्रनि कुशवाहाले बताए । प्रनि कुशवाहाका अनुसार मृतक पडितका पति अमरेन्द्र पडित आएर शव बुझ्ने बताए । मृतक पडितकी ५ वर्षीया छोरी तेजल पडित पनि रहेको बुझिएको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार मृतक पडित शुक्रवारसम्म रामगढवा उपस्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत रहेको कर्मचारीहरूले बताए । बिदा भएपछि उपस्वास्थ्य चौकी नजिकै रहे
रिनाको हत्याको आशङ्कामा शैलेन्द्र पक्राउ
प्रस, वीरगंज, १५ चैत/ सेढवा–४ निवासी हरिनारायण यादवकी १८ वर्षीया छोरी रिना यादवको हत्याको आरोपमा पर्सा प्रहरीले एकजना युवकलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान शुरु गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा ड्राइपोर्ट बहुअरी निवासी शैलेन्द्र यादव रहेको प्रहरी उपरीक्ष्Fक गोविन्दकुमार साहले जानकारी गराए । मृतक यादव र पक्राउ परेका यादवबीच दैनिक फोन सम्पर्क र भेटघाट हुने गरेको आधारमा प्रहरीले यादवलाई पक्राउ गरेको हो । प्रहरी स्रोतका अनुसार कल डिटेल प्राप्त भइसकेको छ । एसएमएस डिटेल आएपछि घटनाको पुष्टि हुनेछ । मृतक रिना आप्mनै कोठामा झुन्डिएको र डोरी कसले काटेर ओछ्यानमा सुताएको भन्ने विषयमा अहिलेसम्म पुष्टि हुन सकेको छैन । प्रहरी स्रोतका अनुसार रिना आप्mनी दिदीको अमेरिकामा बस्दै आएका देवरसँग बिहेको कुराकानी चल्दै आएको र रिनाले पनि मन पराएको तथा रिनाका प्रेमी यादवसमेत रहेको प्रहरी स्रोतबाट बुझिएको छ । चैत ८ गते मङ्गलवार बिहान श्रीपुर निवासी रेणुका घिमिरेको घरमा भाडामा बस्दै आएकी रिनाको मृत अवस्थामा शव बरामद भएको थियो । घरधनी घिमिरे स्वास्थ्यकर्मी रहेकी र सो दिन राति एडभान्स मेडिकेयर हस्पिटलमा रात्रि ड्